Iindaba-Ukuqwalaselwa kokubhalwa kwe-chip emva kokuchithwa kwe-AVR microcontroller IC
Ukuqwalaselwa kokubhalwa kwe-chip emva kokuchithwa kwe-AVR microcontroller IC
Njengomphumo wokusetyenziswa kwezixhobo ezahlukeneyo, iindlela zokucwangciswa kokuchithwa kwe-IC kunye neemfuno zamaxwebhu zahlukile.
Enye indlela kukusebenzisa inkqubo yenkqubo eqhelekileyo, ukuba ukusetyenziswa kweenkqubo ngokubanzi, ngokubanzi zixhasa ifayile ye-BIN okanye ye-HEX, ukulayisha ngokuthe ngqo ifayile, emva koko kulungelelwaniso oluhambelanayo, unokutsha ngokuthe ngqo.
Okwesibini, enye indlela kukusebenzisa i-ISP okanye i-JTAG yokukhuphela imowudi yokubhala ifayile, kuba zininzi iintlobo zemigca yokukhuphela, umgca wokukhuphela ngokubanzi uxhaswa kukhuphelo lwe-AVRSTUDIO, ukhuphelo lwe-STUDIO, ifomathi yefayile efunekayo kufuneka ibe ziifayile ze-HEX ezifomathiweyo , ukuba ilayishwe ifayile ye-BIN, ayizukucelwa ifomathi yenkxaso ye-AVRSTUDIO. Kwaye kufuna iifayile zeFLASH kunye ne-EEPROM ezikhutshelweyo ngokwahlukeneyo, oko kukuthi, emva kokuchazwa kokubonelela ngeFLASH kunye ne-EEPOM iifayile ezimbini.
I-AVR microcontrollers IC decryption ineeseti ezininzi zeendawo fuse ezinxulumene nokucwangciswa kwesixhobo kunye nendawo yokusebenza. Ezi fyuzi zibaluleke kakhulu. Abasebenzisi banokuseta kwaye baqwalasele iFuse ukuze benze i-AVR microcontroller eyahlukileyo kwindalo ukuze ihambelane nesicelo esisebenzayo. Kodwa ngenxa yesidingo sokumisela i-fuse, kubaqalayo ukuzisa ukungayiqondi kakuhle indawo, emva kokuchithwa kwe-microcontroller, inkqubo ngexesha lokutshisa, kodwa nakwisimo sefuse, ukuba ubumbeko alulunganga, hayi Umsebenzi okanye utshintsho lomsebenzi. Konke ekutshisweni kwamaxwebhu afihliweyo xa i-fuse kufuneka iqulunqwe, kuba izixhobo zokuxhasa i-AVR zininzi kakhulu, kwaye izixhobo ezahlukeneyo zekhompyuter yesoftware yahlukile, ke yenza okona kulungileyo kwi-AVR microcontroller decryption ngaphambi kokucacisa inkampani ngokwayo Zeziphi izixhobo ziyasetyenziswa, ukuze inkampani ye-chip decryption ngokungqinelana nezixhobo zayo zokwenza imephu yomdibaniso, kulula ukuyichaza emva kwenkqubo ukutshisa, kodwa banokusebenzisa inkampani yokubethela ukubonelela ngeesampulu zokufunda ubumbeko lwefuse, kwaye ezinye Izixhobo zinokufunda i-chip ngokuthe ngqo, ezinye zifunde ukumiliselwa, njl., Kwaye emva koko ufunde ubumbeko olugciniweyo.
Ukuba iyifektri eyodwa-chip, okungagqibekanga kukusebenzisa i-1MHZ RC oscillation njengewotshi yenkqubo, kunye ne-JTAG port ikwimo evumelekileyo. Kwi-fuse ye-AVR ubuncinci bokucoca la manqaku alandelayo.
1, i-AVR fuse inokucwangciswa amatyeli amaninzi, hayi i-fayile ye-OTP yexesha elinye.
2, i-AVR chip encryption lock (LB2 / LB1 = 1 / 0,0 / 0) ayinakukwazi ukufunda i-chip kuyo nayiphi na idatha yeFLASH kunye ne-EEPROM, kodwa imeko yefusethi isenokufundwa, kodwa ayinakuguqula ukuCwangciswa.
3, i fuse uqwalaselo isuntswana kunokufezekiswa ngaxeshanye, ISP kunye JTAG imo serial.
4, khuphela amanyathelo achanekileyo ngala: kwi-chip ngaphandle kokutshixa i-chip ukukhuphela ikhowudi kunye nedatha esebenzayo, qwalasela i-fuse efanelekileyo, kwaye ekugqibeleni uqwalasele indawo ye-chip encryption.
5, i-chip erase command kukuba i-FLASH kunye ne-EEPROM icace gca, kwaye kwangaxeshanye imeko yokutshixwa kabini ilungiselelwe ukuba kungabikho ndawo yokutshixa (LB2 / LB1 = 1/1), kodwa i-chip erase command ayitshintshi enye i-fuse Bit state.
6, kwaye ebaluleke kakhulu yi-BOOTRST bit, le nto iseta ubudlelwane phakathi kwe-chip emva kwenkqubo yamandla ukusuka ku-0X0000 okanye kwindawo ye-BOOT eqale ukuyenza. Ukukhethwa kwenkqubo yemvelaphi yewotshi nayo ibaluleke kakhulu, emva kokuchwetheza inkqubo xa umthengi kungasoloko kulula ukuyisebenzisa, ukudlala indawo yomthombo weewotshi akusetwanga ngenxa yezizathu, ke inkqubo yewotshi kufuneka ihambelane ne useto lwantlandlolo.
7, kufuneka icace gca ukuba i-SPIEN bit, uninzi lwabathengi luye lwabonisana ngefowuni, oko kukuthi, sinika i-microcontroller ayinakunxibelelana ne-ISP, kwaye inokuthenga eyayo, i-fuse ye-SPIEN iqulunqwe yi-ISP , ukuba i-SPIEN yi-1, i-ISP iyavunyelwa ilizwe, ukuba ngu-0 ukuthintela ilizwe, ukuba ilizwe alivunyelwanga, akunakuba yi-chip ye-ISP.
8, i-chip ibhalwe ngokufihliweyo kwaye itshixiwe, ukuba kufunyenwe iifyusi kunye nolungelelwaniso alulunganga, kuya kufuneka usebenzise i-chip erase command ukucoca idatha kwi-chip, ubethele ukhiye wokubethela, emva koko uphinde ukhuphele ikhowudi esebenzayo kunye nedatha, uhlengahlengise iifyuzi ezinxulumene noqwalaselo, kwaye ekugqibeleni uphinde uqwalasele ukubethela kwe-chip's encryption bit.